Ushicilelo loLutsha lweVivo Z1 lulungele uku-oda kwangaphambili: zonke iinkcukacha | I-Androidsis
I-Vivo kutshanje yazise uthotho lwayo lwe-Z lwee-smartphones, ezijolise kwicandelo eliphakathi. Inkampani sele isungule iifowuni ezithile phantsi kolu thotho lutsha, kubandakanya I-Vivo Z1, Z1i, Z10 y Z3. Ngoku, emva kokuba usizisele entsha Vivo Y93, ithe cwaka yasungula enye i-smartphone kwilayini ye-Z: the Ushicilelo loLutsha lweVivo Z1.
Izixhobo 'zoHlelo loLutsha' zihlala zilula kwaye zibiza ixabiso eliphantsi kwiifowuni zoqobo ezikhutshiweyo kwaye le modeli ayisiyiyo loo nto. Nangona kunjalo, esi siginali sihlala siyenye indlela ebalaseleyo ukuthathela ingqalelo xa uthenga into ethile.
Ifowuni inesiboniso se-6.26-intshi ye-FullHD + ye-IPS ye-LCD ngesisombululo sescreen seepikseli ezingama-2.280 x 1.080 kunye ne-19: 9 factor ratio. Umboniso unenotshi yoxande ephezulu kwaye ngaphandle kwalonto, ilawula ukuhambisa umyinge we-90 weepesenti kumzimba womzimba, enkosi kwi-bezels zayo ezimbalwa.
IVivo Z1 inikwe amandla yiQualcomm Snapdragon 660 chipset, kodwa olu Vavanyo loLutsha lweZ1 luxhotyiswe yiprosesa ye-Snapdragon 626, ekwaziyo ukuba max. Ngokudibeneyo, isebenza nge-Adreno 2.2 GPU, 506 GB ye-RAM kunye ne-4 GB yendawo yokugcina yangaphakathi, esinokuyandisa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-32 GB.
Malunga nesebe lekhamera, iza nokucwangciswa okubini ngasemvanjengokuba sele iqhelekile kule mihla. Le modyuli ine-sensor ephambili ye-16-megapixel kunye ne-2-megapixel yesibini sensor, eluhlaziyo kuqwalaselo lwe-Z13's 2 and 1 MP. Ngaphambili, iza ixhotywe nge-16-megapixel shooter yokuthatha iiselfie nokwenza iifowuni zevidiyo.
Isebenza ngenkqubo yokusebenza I-Android 8.1 Oreo phantsi kweVivo's FunTouch OS 4.0. Iinketho zonxibelelwano kwisixhobo zibandakanya i-4G VoLTE, ibhendi emibini ye-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, iBluetooth 5.0 yamandla asezantsi, iGPS ene-A-GPS, kunye ne-GLONASS. Ukongeza, inikwe amandla ibhetri yamandla angama-3.260 mAh angahambelaniyo nalo naluphi na uhlobo lwetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza.
Inkampani sele iqalile ukuthatha ii-odolo zangaphambili zeVivo Z1 yoLutsha yoHlelo kuyo china ivenkile esemthethweni kwi-intanethi. Ixabiso lomnxeba yi-1.098 yuan, ethi iba malunga ne-140 euro, kwaye kulindeleke ukuba iqale ukuhambisa ukusuka nge-11 kaNovemba kweli lizwe. Iya kufumaneka ngemibala emithathu: emnyama, i-aurora (gradient) kunye nobomvu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Vivo Z1 uHlelo loLutsha, uluhlu olutsha oluphakathi olufikelelekayo ngoku olukhona ngoku kulandelwa kwangaphambili